Xadgudubyada Led Dabacsan
Xadgudubyada Qarniga 1aad ee Wireless-ka
Xadgudubka Jiilka 2aad
Xargaha Led Dabacsan (IP20)
rajada iftiinka xargaha
Dhamaan warshadaha suuqyada fudud, xaalada horumarineed ee hada waa mid aad ufiican, laakiin tartanku waa mid aad u xoogan. Hadafkeenu waa sameynta alaabada ugu tayada fiican, si adeega macaamiisha uu ugu kalsoonaado alaabtayada. Iftiinka xariggu wuxuu leeyahay adeegyo iyo shaqo ballaadhan; gadaal ...
Dhamaan warshadaha suuqyada fudud, xaalada horumarineed ee hada waa mid aad ufiican, laakiin tartanku waa mid aad u xoogan. Hadafkeenu waa sameynta alaabada ugu tayada fiican, si adeega macaamiisha uu ugu kalsoonaado alaabtayada. Iftiinka mareegta wuxuu leeyahay kala duwanaansho ballaaran o ...
Codsiga iyo xulashada suunka laambadda
Suunka laambaddu wuxuu u qaybsan yahay suunka iftiinka danab hooseeya iyo suunka iftiinka caadiga ah. Ka waran suunka iftiinka ee kor lagu isticmaalay? Codsiga isha iftiinka aan tooska ahayn ee saqafka sare, isha iftiinka dheeriga ah ee ka hooseysa golaha wasiirada, isha iftiinka dheeriga ah ee golaha wasiirada iyo isha iftiinka qurxinta, ...
Xulitaanka xulashada iyo rakibida suunka iftiinka LED
Markaad qurxinaysid, waxaan badanaa aragnaa inay ku jiraan liistada laydhka leedhka ah ee ku jira liiska qurxinta, laakiin milkiilayaasha badankood ma garanayaan waxa ay tahay. Xaqiiqdii, tani sidoo kale waa wax caadi ah. Marka hore, xiriir badan malaha. Ta labaad, maxaa yeelay suunka iftiinka ayaa qarsoon, waxaan kaliya aragnaa iftiinkiisa, laakiin ma arki karno hooskiisa. Gudaha ...
Carwadii 123-aad ee Kanton waxay ku dhammaatay si guul ah
Joineonlux wuxuu diiradda saarayaa horumarinta, wax soo saarka iyo iibinta qalabka LED-ka. Waxay ku guuleysatay amaan macaamiisha ajnabiga ah waxayna sidoo kale soo jiidatay dareenka ballaaran. Dukaammadu waa kuwo aad u firfircoon, buuq iyo buuq badan. Macaamiisha badankood waxay kahadleen faahfaahinta qolka, waxaana jira fursado caro ...
Carwadii 121-aad ee Kanton ayaa si guul ah ku soo dhammaatay
Zhongshan Joyeonlux wuxuu leeyahay 17 sano oo khibrad ah wuxuuna had iyo jeer la jaan qaadayaa teknolojiyaddii ugu dambeysay ee la xiriirta tayada wax soo saarka, adeegga macaamiisha iyo qaabeynta wax soo saarka. Waxaa xusid mudan inaan fiiro gaar ah u yeelanno qaabeynta fudud ee badbaadada iyo tayada. Joyeonlux wuxuu macaamiisha siiyaa ...
Tusaale ahaan, laambadda fidsan ee fidsan iyo laambadda fidsan ee fidsan ayaa loo qaybin karaa saddex nooc, yacni LED-ka caadiga ah, laambadda fidsan ee fidsan, iyo laambadda fidsan ee fidsan.
1. Xaraashka Fudud ee Fudud ee loo yaqaan 'LED Flexible light light' waxaa lagu soo ururiyay FPC iyo SMD LED, sidaa darteedna dhumucda alaabtu waa kaliya dhumucda lacagta, mana qaadanayso meel; faahfaahinta guud waxaa ka mid ah 18 Laydh oo dhererkoodu yahay 30cm, 24 Laydh iyo 15 Laydh, 24 Laydh iyo 30 Laydh leh 50c ...
Maxay yihiin taxaddarrada rakibidda suunka iftiinka LED-ka
Xusuusnow rakibida suunka iftiinka LED: habka fiilooyinka ee suunka iftiinka LED. Awoodda guud ee suunka iftiinka LED-ka waa DC 12V, sidaas darteed beddelidda korantada ayaa loo baahan yahay. Baaxadda korontada waxay kuxirantahay awooda iyo dhererka iskuxirka ee suunka iftiinka LED-ka. Fiilooyinka mono ...
Xulashada suunka iftiinka LED waxay kuxirantahay ujeedada rakibida iyo nalalka
Farqiga u dhexeeya suunka nalka korantada-sare iyo suunka iftiinka danabka hooseeya waa: suunka iftiinka korantada sare guud ahaan waa 50/100 mitir oo duudduuban, suunka iftiinka danab guud ahaan waa 5-mitir oo duub ah, suunka nalka korantada-korantada waa biyuhu, danab hooseeya suunka iftiinka ahi waa mid aan biyuhu xirin ama aan ahayn, laambad ...